Mianara mampiasa sary vector | Famoronana an-tserasera
Jorge Neira | | dia midika hoe, Cartoon vector
Sary Vector loharano iray hafa ao anatin'ny tontolon'ny famolavolana izy ireo. Ny farany dia vokatra a fitaovana vaovao izay mamela ny mpamorona hanana andiana tombony rehefa manatanteraka ny asany orinasa. Ho fanampin'izany, mamela anao miasa amin'ny alàlan'ny fitsapana sy lesoka, izany hoe, avy amin'ny andrana be dia be.
Vector prototype io, famolavolana modely manokana, misy andalana voafetra an'arivony ary isa izay avelao ny mpamorona hanome mazava tsara ny maodely irina. Ireo toetra ireo dia mamaly ny famolavolana matematika, izay mamela ny mpamorona hametraka fepetra tena manokana rehefa manamboatra ny votoatiny. Toy izany koa, ny vector dia azo havaozina imbetsaka araka izay heverin'ny mpamorona azy.
1 Jereo ny tontolon'ny vector
2 Mpisera izay mankafy ny maranitra sy fankasitrahana amin'ny fahitana avo
3 Ny fatiantoka ny vector
Jereo ny tontolon'ny vector
Vector dia noforonina tamin'ny alàlan'ny rindrambaiko rindrambaiko voatosika hamolavola azy ireo. Mamela ireo ovao ny vector araky ny filan'ny mpamorona, manolotra anao tsy manam-petra safidy famolavolana ho an'ny asanao, izay ahafahanay miresaka momba ny habeny, ny loko, ny loko ary ny volony.
Vector, amin'ny maha loharano azy, ankehitriny andiana tombony ho an'ny mpamorona ary iza no mety ho ireto manaraka ireto:
Ny fampiasana rakitra maivana, mamela ny mpamorona fitantanana maivana ny rakitra. Ity dia mety ho tombony azo avaozina ao anatin'ny tontolo famolavolanaMatetika ny mahita rindrambaiko izay miteraka tetik'asa mavesatra marobe, ary amin'izany, mandreraka be ny mitahiry na mampakatra pejy.
Ny fivadihana ireo dia mety mahitsy fehezan-dalàna mitovy
El redesign ny modely vector dia tsy hanimba ny kalitaon'ny sary amin'ny fotoana rehetra, noho izany, afaka manao izany ny mpamorona hazavao ireo fiheverana izay heverinao fa ilaina, ity, noho ny fanapaha-kevitra tsy miankina.
Misaotra ny endriny, azo ovaina ny volo Tsy misy olana lehibe amin'ny fitaovana entina manitsy ny lahatsoratra, izay mamela ny mpamorona hanova ny lahatsoratra vector tsy misy olana lehibe momba ny kalitaony.
mamela miasa amin'ny sary amin'ny antsipiriany, izay mamela ny mpamorona handrindra ny famahana ny sary.
Mpisera izay mankafy ny maranitra sy fankasitrahana amin'ny fahitana avo
Amin'ny vokatrao farany, maranitra ny sary vongana, vokatr'izany vokatra tsara be momba ny fandalinana sy ny fankasitrahana ny sary.
Ao anatin'ny sarimiaina dia fitaovana tena atolotra anao, ary koa amin'ny famelabelarana, misaotra ny zava-misy ry zareo valiny mivaingana, mivaingana indray mandeha ny elaboration. Ankehitriny, toy ny misy tombony ihany koa, hisy ihany koa ny andiany fatiantoka, izay mety ho ireo aseho etsy ambany.
Ny fatiantoka ny vector
Tsy azo atao izany fitantanana sy famokarana galeriana jpg ary fisie raster.
Noho ny endriny, Ny mifanentana dia iray amin'ireo teboka ratsy indrindra ny vector, izay miteraka fahasarotana lehibe rehefa miara-miasa amin'ny vector, ary manolo-kevitra avy eo hanana ny rindrambaiko mifanaraka amin'izany.
Hamboarina indray ny sary Vector afaka mandany andro raha ampitahaina amin'ireo programa na endrika miasa ao amin'io faritra io. Izany dia vokatry ny zava-misy fa ny singa tsirairay avy amin'ilay vector dia tsy maintsy apetraka amin'ny fototra mafy, izay manondro fikajiana matematika marobe voatosika ho manome modely mazava tsara vector.
Tsy azo atao izany manao fanadihadiana karazana spatial, ary koa ny sivana amin'ny polygons.
Ny lahasa matematika izay tiana holazaina amin'izany dia mety ho sarotra ho an'ireo izay ao anatiny marimaritra iraisana ny faritra famoronana na faritra rehetra hahavita.
Mampihena ny sary dia mety hiteraka fanjavonan'ny fotodrafitrasa rehetra an'ny vector, toy ny tsipika mety aminy.
Vokatry ny vakoka ho loharano ao anatin'ny faritra famolavolana, izay toy ny loharano rehetra, dia misy andian-dahatsoratra tombony sy lesoka izany, raha ampiasaina tsara, dia afaka mitondra fitaovana tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Mampiasa sary vongana
Juan | manova sary masina dia hoy izy:
Ataovy ao an-tsaina ihany koa fa ny sary masina dia matetika no mila ampiasaina amin'ny habe, noho izany dia fotoana tsara hanararaotana tanteraka ny toetran'ny sary mihetsika azo ovaina mba hamoronana lamina mijery tsara izay azo ampiasaina amin'ny tanjona maro.
Ankoatr'izay, miaraka amin'ny fonosana rindrambaiko vector toy ny Adobe Illustrator, ny endriny tsirairay, ny gradient ary ny stroke izay mamorona ny sary dia azo ovaina sy ovaina amin'ny fotoana rehetra, tsy toy ny famolavolana miorina amin'ny pixel izay mila haverina rehefa misy fanovana.
Ny fakana làlana fototra amin'ny fampiasana ity rindrambaiko ity dia tsy vitan'ny hoe hanampy anao hamaha zavatra tsotra hatramin'ny voalohany, fa hitahiry vola anao ary amin'ny dingana hianaranao hampiasa azy io tsara.
Mamaly an'i Juan | manova sary masina
Mpamorona tsara kokoa ve ianao raha toa ka lafo ny vola aloa aminao?